ပီတိ: ၂၀၁၁ စာပေဟောပြောပွဲ
Posted by P.Ti at Friday, March 18, 2011
Thank you Ko Pi Ti! We will go there.
ဘာကြောင့် ဒီလိုတွေ ဖြစ်နေတာပါလိမ့်လို့ တွေးနေမိတာ... အခုလို စုံစုံလင်လင် သိလိုက်ရလို့ တကယ် ကျေးဇူးပါ...
ကျေးဇူးပါ။ Myagreen၊ အမသက်ဝေ နဲ့ မပန်။
ကပီတီ ဘလော့ဒေးအတွက် အမှတ်တရ ရေးပေးဖို့ ခင်မင်စွာ တက်ဂ်(tag) ထားပါတယ် ...